बीच भलिबल मा प्रतियोगिताहरु: सरकारी नियम। बीच भलिबल को नियम अनुपालन
गर्मी - पानी मा विश्राम र मजा लागि समय। ठूलो कम्पनीहरु जाँदै, मान्छे रमाइलो गर्न विभिन्न तरिका संग आउँदैछन्। कसले फुटबल खेल्छ र जो बस गर्मी सूर्य basking गर्ने कैम्पफ़ायर, एक गिटार संग गीत गाउँछन्। तर समूह प्रत्येक लागि undoubted विशेषता समुद्र तट सोख नरमाइलो लाग्यो तटीय अवकाश प्राप्त गर्दैन लगभग एक शताब्दी छ जो भलिबल, बीच भलिबल वा बरु, हुन र केवल तिनीहरूलाई हुनेछ।
क्यालिफोर्निया - समुद्र तट खेल को जन्म ठाउ
खेल बालुवा ठूलो बल संग उत्पत्ति कहाँ बारेमा संस्करण। तर, क्यालिफोर्निया गर्न लगाइदिए। तर युरोप मा, खेल फ्रान्स ले nudists शुरू। आधिकारिक पहिलो खेलमा 1927 मा आयोजित थियो, यो कम्पनी को auspices अन्तर्गत क्यालिफोर्निया राज्य बीच Holzman को अवस्थामा छ बुझे।
1965 आए र बीच भलिबल को खेल को नियम अपनाए पहिलो सम्बद्धता सिर्जना गरेर चिन्ह लगाइएको थियो। अनौपचारिक Albeit, विश्व मात्रा को अझै पहिलो प्रतियोगिता 76th वर्ष मा आयोजित थियो। जुलाई मा 83rd भलिबल व्यवसायीक को संघ स्थापना। 1986 मा, विश्व भलिबल संघ यो खेल खेल स्वीकृत गरेको छ।
Albeit एक प्रदर्शन खेल, तर सबै नै रूपमा बल खेल ओलम्पिक कार्यक्रममा समावेश बालुवा मा एक 92-एम मा। र 97th आधिकारिक मा विश्व च्याम्पियनशिप आयोजित थियो खेल को एक नयाँ तरिका। सबैभन्दा समुद्र तट खेल सफल अमेरिका र ब्राजील देखि टोलीमा छ।
क्लासिक र बीच भलिबल: समानता र भिन्नता
यो खेल भलिबल को क्लासिक खेल आधारित मनोरञ्जन रूपमा उत्पत्ति। तर समय, परिवर्तन भइरहेको, बीच भलिबल प्रतियोगिताहरु को नियम धेरै भिन्न छन्। खेलाडी लागि यस्तो जम्पिङ क्षमता, उत्कृष्ट प्रतिक्रिया, फिड शक्ति र खेल र बल को महसूस महत्त्वपूर्ण गुणहरू केही अन्य आवश्यकताहरू थिए, तर थपिएका थिए र। खेल बालुवा प्ले छ, र यो खेलाडीहरूलाई शारीरिक फिटनेस को एक निश्चित स्तर आवश्यक छ। धेरै खेल जस्तै, भलिबल बाहिर मौसम भए तापनि प्रतिस्थापन को संभावना खेल को पाठ्यक्रम उपलब्ध छैन संग लगे हुन्छ, क्रमशः, धेरै धीरज गर्न खेलाडीहरू आवश्यक छ। र सायद क्लासिक भलिबल देखि सबै भन्दा हडताली फरक खेलाडीको आवश्यक नम्बर कल गर्नुपर्छ। बीच भलिबल खेलाडी को नियम अनुसार मात्र2र त्यसैले तिनीहरू बहुमुखी हुनुपर्छ।
संकेत र इशारा
चेतावनी इशारा - सबै अन्य टोली खेल बाट खेल मतभेद भए तापनि, यो अर्को रोचक विशेषता विशेषताहरु। खेल एक टोली सदस्य को अनौपचारिक नियम अनुसार खेल मैदान मा थप कार्य को लागि रणनीति मा सहमत हुनुहुन्छ। यस्तो संकेत लिन्छ एक खेलाडी क्षेत्र को टाढा पक्षमा छ अर्को मालिश। प्रत्येक हात आक्रमण को एक निश्चित पक्ष पारस्परिक रहेको छ। र इशाराहरू आफूलाई हो:
1 पिन (लाइन मा पिन इशारा ताला);
2 पिन (विकर्ण मा ताला);
मुट्ठी (खेलाडी एकाइ छैन गर्नेछन्);
खुला पाम (हड्ताल "बल" अवरुद्ध)।
मनमा संवाददाता खेलाडी आपूर्ति गर्न आवश्यकता छ भनेर एक मुट्ठी मा एकांतर squeezing-unclamping हात - पनि "चमकता" छ।
त्यहाँ एक सम्पूर्ण छ भन्ने FIVB सिर्जना गरेको बालुवा मा प्ले लागि नियम। सबैभन्दा ती आधारभूत विचार गर्नुहोस्।
पेशेवरहरुको लागि बीच भलिबल को नियम निम्न, प्रत्येक टोली दुई खेलाडी खेल्छ, यो एक प्रतिस्थापन प्रदान गर्दैन। साइट बालुवा, यसैले नाम मा स्थित छ। 8 मीटर द्वारा प्रत्येक टोली 8 प्याड आकार, र विभाजित छ, त्यो जाल फैलयो। पुरुष र महिला को लागि शुद्ध उचाइ फरक (क्रमशः, 2.43 र 2.24 मीटर) छ। खेलको मुख्य उद्देश्य बल शत्रु, तपाईं यो तपाईं संग हुँदैन निश्चित गर्न आवश्यक हुनेछ भुइँमा खसे सुनिश्चित गर्न प्रत्येक आदेश प्रयास छ। अनुमति मात्र होइन हात गरेर, बल घृणा उत्पन्न गर्न प्रदान गरिएको छ।
बल विपरीत भाग मा एक लाइन क्षेत्रको लागि लागू गर्न अनुमति दिएको छ। को विरोध टोली बल गर्दा यो एक पंक्ति मा एक पटक भन्दा बढी आकर्षित गर्दैन बल खेलेकै गर्न सक्छन् खेलाडीहरू प्रत्येक संग, तीन पटक सम्म स्पर्श गर्न अनुमति दिएको छ। यो अपवाद पहिलो सम्पर्क विन्दु र लक हडताल छन्।
अर्को पारी बल फाइल जब लटरी जित्यो कि टीम, तर अन्य खेलाडी लगे। यस को लागि यो बल, विपरीत मंच गर्न गिर कि लाइन कदम वा टोली एक गल्ती आवश्यक छ। दम्पतीलाई लटरी बल प्रत्येक जितको लागि 1 बिन्दु हुन्छ।
म्याच समयमा, क्रमशः, बीच भलिबल को नियम, दुई खेल खेले, र जीत, एक टोली दुवै जीत हुनुपर्छ। एक टाई को मामला मा तेस्रो, अतिरिक्त पार्टी आयोजित छ। खेलाडीहरूलाई विजेता को शीर्षक कमाउन क्रममा कम्तिमा 21 अंक प्राप्त हुनुपर्दछ, तर यो खाता मा फरक2भन्दा बढी अंक हुनुपर्छ। अन्यथा, खेल इच्छित खाता सम्म जारी छ। अतिरिक्त ब्याच लागि, यो मुख्य खेलमा जस्तै नियम अन्तर्गत 15 अंक प्राप्त गर्न आवश्यकता परिकल्पना गरिएको छ।
यो 2014 मा बीच भलिबल को नियम जुलाई र अगस्ट मा परीक्षण गरिने केही परिवर्तन भइरहेको छ कि टिप्पण लायक छ। अब तीन छुवाइहरू को नियम आदेश ब्लक स्पर्श लागू हुँदैन। तसर्थ, स्पर्श एकाइ बाहेक, खेलाडीहरूलाई विपरीत पक्ष गर्न बल फर्कन अर्को3स्पर्श गर्ने अधिकार छ।
पनि अपवाद औंलाहरु, माथि पहिलो स्पर्श, फिड ब्लक को स्वागत समावेश हुन सक्छ जो शत्रु आक्रमण गरेर सम्पर्क पछि सम्पर्क गर्दा बल संग सम्पर्क समय विस्तार गर्न हटाइयो।
बीच भलिबल को प्रतियोगिता नियम पनि ठीक गर्नु अनुपयुक्त व्यवहार प्रतियोगिता समयमा खेलाडीको। यो unsporting व्यवहार हुन सक्छ: बदमासी, spores र जस्तै; सकल व्यवहार, जस्तै, contemptuous मनोवृत्ति; दुरुपयोग, इशाराहरू सहित; आक्रामक व्यवहार र शारीरिक आक्रमण।
दलहरू बीच वा प्ले कुनै पनि असामान्य व्यवहार पनि दण्ड मा परिणाम एक पछि खेल मा लागू गर्न।
अर्को रोचक तथ्य
1948 मा, घटनाको आधिकारिक आयोजक कम्पनी Pepsi थियो।
शास्त्रीय भलिबल, बीच भलिबल विपरीत, नियम अनुसार, तापमान सीमितता खेल समयमा प्रदान गरिएको छैन।
पार्टी को र सामान्य मा सबैभन्दा लामो मिलान गर्दा थप पक्ष 33:35 को एक स्कोर संग समाप्त, 2005 मा भयो।
लागि बल्लेबाजी गति रेकर्ड: मानिसहरू - प्रति घण्टा 114 किलोमिटर, महिला - प्रति घण्टा 86,5 कि।
रूसी लुगर Demchenko अल्बर्ट: जीवनी, खेल क्यारियर, व्यक्तिगत जीवन
किन कर्लिंग मा बरफ RUB? नियम र लोकप्रिय टोली खेल सर्तहरू
Podchufarova ओल्गा: पुष्ट क्यारियर र जीवनी
कसरी र "अनन्त" औषधि बिल्लियोंका लागि निर्धारित गरिन्छ?
सर्तहरू हामी के जानकारी ऋण छन्
महानगरीय फिलिलेट (वाख्रोमसेव किरिल वर्फोलोमेविच): जीवनी
प्रति 1 क्यूबिक brickwork सिमेन्ट खपत। गणना को सुविधाहरू, अनुपात र सिफारिसहरू
"मोज़ालिटीनिटी कोड" वा "डेनिस स्टिलिटोभको कन्सर्ट पछि" नोट्स "8 मई 2013 को विजय दिवसमा" फर्कनुहोस्
अजवाइन सूप: एक सरल नुस्खा
चारा चुकंदर। बीउ, खेती
टाउको एकाइ "एन्ड्रोइड": मोडेल को समीक्षा
कसरी च्याउ मक्खन को एक धनी सूप तयार?